Ahoana no hanatsarana ny filaharana amin'ny fanaovana fanadiovana tranonkala eo an-toerana?
Andeha hojerentsika ny fijerin'ny tranonkala fikarohana ao an-toerana (raha tsy izany dia SEO eo an-toerana). Ny Search Engine Optimization dia fantatra amin'ny fisafidianana asa ho an'ny fampahalalana rehetra navoaka tao amin'ny pejin'ny tranonkala, mba hahasarika azy ireo kokoa amin'ny mpitsikilo an'i Google amin'ny fanaraha-maso an-tserasera amin'ny lisitry ny SERPs. Raha mandinika ny fanatsarana ny fikarohana ao amin'ny tranokala eo an-toerana, dia midika izany fa ny fizotry ny varotra an-tserasera dia anisan'ny vokatra voalohany ho an'ny fangatahana ao an-toerana. Amin'ny ankapobeny, ny ezaka fanadiovana tranonkala toy izany dia alefa amin'ny asa amin'ny lahatahiry tranainy sy ny fivarotana votoaty ao an-toerana mba hahazoana vahaolana amin'ny aterineto haingana amin'ny fanaovana raharaham-barotra. Eto ambany eto ny fanadihadiana fohy momba ny sehatra rehetra mifandraika amin'ny fikarohana momba ny fikarohana ao amin'ny tranonkala.
Anisan'ny olana lehibe indrindra eto ny eto Google Page misy anao ary ny fikarohana amin'ny Internet - design your own name online for free. Nahoana izy io no tokony ho voalohany sy ambony indrindra? Satria satria heverina fa ny sehatry ny fanatrehanao an-tserasera, izay nahazo ny safidy matanjaka indrindra hipoitra mivantana amin'ireo fangatahana fikarohana voalohany amin'ny orinasam-paritra. Raha toa ka mbola tsy nitsidika ny Google My Business anao manokana ianao, dia tadiavo izany na manomboka mameno ny efa misy anao. Ity ny lisitry ny zavatra soso-kevitrao hanafenanao amin'ny endrika tranonkala fanadiovana anao: mametraha ny anaran'ny orinasa manontolo, ny famaritana ny famintinana miaraka amin'ny fandaharam-potoana sy ny laharan'ny findainao, ny rohy ao amin'ny rindrinao, ary ny sary maharesy lahatra momba ny tetikasa ara-barotra anao.Raha manao izany ianao dia azonao atao koa ny mampiasa ny hafatra Google, miditra Google Plus sy ireo vondrom-piarahamonina maoderina ao anatiny. Ary aza adino ny mampirisika ny mpampiasa maro handao ny hevitra sasany ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa, raha mametraka ny votoatiny vaovao sy ny fanatsarana ny asa sorany amin'ny fotoana.
Farany, tandremo tsara ny fampielezan-kevitry ny tranonkala fanadiovana anao amin'ny fanamarinana tsara. Manolotra soso-kevitra amin'ny fanaovana safidy aho amin'ny fisafidianana iray amin'ny fitaovana Scane Directory Scan misokatra. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hahita ny tsara sy ny toerana misy ny lahatahiry momba ny orinasa ianao. Ny ankamaroan'ireo lisitra ireo dia mitaky dingana sy hetsika mitovy, toy ireo izay efa voarakitra ao amin'ny Google My Business Page. Manoro hevitra aho fa manana fanamarinana indroa satria ny tadiavinà fikarohana dia aleo maneho ny vokatra azo tsoahina fotsiny, noho izany dia tokony hesorinao ny antontan-kevitra tsy marina na tsy misy ifandraisany amin'ny raharaham-barotrao. Tsy ilaina ny mitazona ny fotoanao sy ny ezaka, satria miara-miasa amin'ireo zavatra vitsivitsy ireo ianao dia mety hanome anao ny fiantraikany eo amin'ny fidirana amin'ny tranonkala eo an-toerana, ka manome vahaolana haingana ho anao.
Farany, manoro hevitra aho amin'ny fananana fiheverana araka ny tokony ho izy ho an'ny profil sosialy. Tadidio fa manao zavatra izy ireo, indrindra mikasika ny fanadiovana tranonkala eo an-toerana. Aza misalasala ny manao lisitry ny profil sosialy toy ny Facebook na Twitter, raha jerena ireo loharano lehibe sy rohy mitondra ny làlana mankany amin'ny tranonkalanao lehibe. Ataovy azo antoka fa mihazona tombon-tsoa amin'ny fandefasana ny hafatrao ianao, ary tandremo tsara ny votoatiny. Fantaro ireo safidy midadasika amin'ny marketing ara-tsosialy, satria fantatrao tsara ny Google sy ireo fitaovam-piadiana hafa, ny ezaka ataonao eto dia hanana fiantraikany mahasalama eo amin'ny fikarohana ao amin'ny tranokalanao.